2 “Vane nhamo vaya vanoronga zvakaipa, nevaya vanoita zvinokuvadza vari pamibhedha yavo!+ Vanozviita kwaedza mangwanani,+ nokuti vane simba rokuzviita mumaoko avo.+ 2 Vakachiva minda, vakaitora nechisimba;+ vakachivawo dzimba, vakadzitora; uye vakabiridzira murume neimba yake,+ murume nenhaka yake.+ 3 “Naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘Tarirai ndiri kufungira mhuri iyi+ dambudziko+ ramusingazobvisi mitsipa yenyu+ pariri, zvokuti hamuzofambi muchizvikudza;+ nokuti ichava nguva yedambudziko.+ 4 Pazuva iroro mumwe munhu achakutaurirai chirevo+ uye achaita mariro, chokwadi achaita mariro.+ Mumwe munhu achati: “Chokwadi takapambwa!+ Anochinja mugove wevanhu vokwangu.+ Anoubvisa kwatiri sei! Anokamurira munhu asina kutendeka minda yedu.” 5 Naizvozvo hauzovi nomunhu anokanda tambo, achishandisa mujenya,+ muungano yaJehovha. 6 Imi musataura mashoko.+ Ivo vanotaura mashoko. Havazotauri mashoko pamusoro pezvinhu izvi. Kunyadziswa hakuzobvi.+ 7 “‘Haiwa iwe imba yaJakobho,+ zviri kunzi here: “Mudzimu waJehovha hauchafadzwi here, kana kuti izvi ndizvo zvaakaita?”+ Mashoko angu haaiti zvakanaka+ kune uya anofamba zvakarurama here?+ 8 “‘Nezuro vanhu vangu vakandimukira somuvengi chaiye.+ Imi munobvisa chishongo chakanaka pamberi penguo, pavanhu vanopfuura vaine chivimbo, sevaya vari kudzoka vachibva kuhondo. 9 Munodzinga vakadzi vevanhu vangu muimba inofarirwa kwazvo nomukadzi. Munobvisa kubwinya kwangu+ pavana vake nokusingagumi.+ 10 Simukai muende,+ nokuti ino haisi nzvimbo yokuzororera.+ Kuparadza kuripo; uye basa racho rokuparadza rinorwadza+ nokuti iye haasisina kuchena.+ 11 Kana munhu anofamba achitevera mhepo nenhema, akataura nhema+ achiti: “Ndichakutaurirai mashoko pamusoro pewaini uye pamusoro pedoro rinodhaka,” iye achavawo munhu anotaura mashoko nokuda kwevanhu ava.+ 12 “‘Chokwadi ndichaunganidza Jakobho, mose zvenyu;+ chokwadi ndichaunganidza vakasara vaIsraeri.+ Ndichavaisa mudanga vakabatana, seboka rezvipfuwo, seboka rezvipfuwo riri mumafuro aro;+ vachaita ruzha nevanhu ikoko.’+ 13 “Munhu anovavhurira nzira achaenda pamberi pavo:+ chokwadi vachavhura nzira vobuda. Vachapfuura nepagedhi, uye vachabuda napo.+ Mambo wavo achapfuura ari mberi kwavo, Jehovha achivatungamirira.”+